Kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League oo ku dhow inay heshiis hordhigto Sergio Ramos… (Miyuu soo dhammaaday waayihiisii Real Madrid?) – Gool FM
Kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League oo ku dhow inay heshiis hordhigto Sergio Ramos… (Miyuu soo dhammaaday waayihiisii Real Madrid?)
(Madrid) 31 Maajo 2021. Koox ka dheesha horyaalka Premier League ayaa la soo warinayaa inay ku dhowaday inay heshiis labo sanadood ah hordhigto Sergio Ramos sida wararku ay sheegayaan.
Shabakadda ciyaaraha ee ESPN ayaa warinaya in Kooxda kubadda cagta Manchester City ay dalab ka gudbinayso daafaca Real Madrid ee Sergio Ramos, isla markaana ay ku dhowdahay heshiis labo sanadood ah u bandhigto.
Daafacan ayaa loogan gacan haatinayaa garoonka Etihad kaddib markii kooxda Sky Blue ay ku guuldarreysatay inay hanato Champions League oo ay gaartay Final-kiisa.
Kooxda ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa rajaynaysa inay hesho adeegga 35-sano jirkaan, haddii aysan isaga iyo kooxdiisa Real Madrid gaarin heshiisa lagu cusboonaysiinayo qandaraaskiisa garoonka Santiago Bernabeu.
Ramos ayaa heshiiskiisa kooxda Real Madrid waxa uu ku eg yahay dhammaadka bisha June ee berri bilaabanaysa, waxaana uu horey isaga diiday heshiis kordhin hal sano ah oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa Los Blancos.